News - Oge a kara aka yabasị na-apụta!
Oge a kara aka yabasị na-apụta!
Otu n'ime ọrụ na-akwụghachi ụgwọ ọrụ m dị ka onye na-ege ntị nke ọma bụ obere ihe niile ị na-ekenye m, ma ọ bụ nri a na-eme n'ụlọ, akụkọ banyere mba gị, foto nke ngwaahịa ubi ị na-eto n'ala, ma ọ bụ nke kachasị mma niile, na-ahụ ihe ubi anyị na-egbute kemgbe ọtụtụ afọ na-agbapụta na mberede site na mkpụrụ n'ime ala iji na-agbasa ọta ha. [tinye ihe ọkụkụ kụrụ ebe a n'etiti] mkpụrụ obi magburu onwe ya kesara foto ahụ n'elu m na ngwụcha izu gara aga. Ọ na-achịkọta ihe niile m na-agbalị ikwu ebe a kemgbe afọ iri gara aga. Enwere m ike ịnwe ogologo oge n'ohere a oge ụfọdụ. Enweghị m ihe ọ bụla iji gbakwunye na ederede mara mma.
A na-eto eyịm anyị n'oge mgbụsị akwụkwọ kwa afọ, ma e wezụga obere eyịm gbanyere mkpọrọgwụ naanị na-eto n'akụkụ kachasị oyi na ugwu. Dị ka anyị niile mara, eyịm oge mgbe niile dị ka mkpụmkpụ. Eziokwu ya bụ na anyị bi na ihu igwe na-ekpo ọkụ, udu mmiri, iru mmiri. Hot, udu mmiri, na iru mmiri bụ ọnọdụ zuru oke maka ọrịa ọrịa ahịhịa na-amụba. Anyị na-eme ike anyị niile iji hụ na anyị malitere site na mkpụrụ osisi kachasị nwee ike, ma nye ala ihe niile osisi nwere ike ịchọrọ. Obere oge ịkwaga na ihu igwe dị jụụ, ma ọ bụ jiri ọtụtụ ero ojoo, anyị na-enweta oge owuwe ihe ubi izu ole na ole. Anyị nwetara izu ole na ole nke eyịm n’afọ a; ziri ezi na nkezi, echekwara m na ọ bụ ezigbo mma maka ihe mgbụsị akwụkwọ dabara adaba.
Onyinye nke November nwere ike inwe ntakịrị ọkụ ka ọtụtụ uche anyị na-atụgharị na ọdịda na kụrụ oge oyi, n'ihi ya, anyị niile nwere ezigbo ihe ị ga-eri maka ọkara nke afọ na ugbo.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ ga-amasị gị ile anya na weebụsaịtị ọhụrụ anyị? Ugbo ala AGR choro inu gi! Pịa na njikọ a www.primeagr.com ma kwupụta olu gị! Daalụ dị ka azụmahịa gị oge niile, ma nwee izu!
Post oge: Nov-25-2020
Mba E 1703-2 reprenelọ ahịa na ọwa ọkụ Square High-tech Mpaghara Zibo City Shandong Province Pr China
N'ỌD V dịgasị iche iche nke ngwaahịa ugbo, AS ...
Ọ niile n'ubi, n'ụzọ nile ala